Famatsiana herinaratra : trandrahina ny angovo azo havaozina | NewsMada
Famatsiana herinaratra : trandrahina ny angovo azo havaozina
Natao teto Antananarivo, ny 12 avrily teo, ny fivoriamben’ireo orinasam-panjakana misehatra amin’ny famokarana herinaratra aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Nandray anjara tamin’izany ny Jirama (Madagasikara), ny Mamwe (Kaomoro), ny EDF (La Réunion), ny CEB (Maorisy) ary ny PUC (Seychelles).
Nisy ny fifanakalozam-baovao teo amin’ny mpandray anjara, notanisaina ny olana diavin’ny tsirairay, ny vahaolana sy ny fandaharanasa ho an’ny hoavy. Mikasika ny eto Madagasikara, mikasa ny hametraka foibe mamokatra herinaratra hafa, toy ny azo avy amin’ny masoandro, ny Jirama, hanampiana ny azo avy amin’ny tohodrano. Mahatratra 45 ny foibe haorina amin’ity taona 2018 ity, manana tanjaka 65 Mw manerana ny faritra, indrindra ny renim-paritany. Haverina amin’ny laoniny koa ny foibe HFO, manana tanjaka 40 Mw, simba satria tsy voakojakoja, azo avy amin’ny tohodrano. Manampy ireo ny fanapariahana ny kaontera manokana (intelligent) miisa 8.500, ny kaontera miisa 50.000 tsy azo hanaovana hosoka sy aloa mialoha ny vola (pré-payés), ny fampandehanana toby iray azo avy amin’ny masoandro manana tanjaka 20 Mw, ny fanatsarana ny tolotra ho an’ny mpanjifa, sns.
Voalaza fa mitovitovy avokoa ny saran’ny herinaratra aty amin’ny ranomasimbe Indianina, satria 0,22 dolara/Kw ny eto Madagasikara, 0,35 dolara/Kw any Kaomoro, 0,30 dolara/Kw ny atsy Seychelles sy La Réunion.